The Great Tuskers of Matusadona National Park – National Geographic Society Newsroom
Matusadona National Park in northern Zimbabwe is one of the few places in Africa where great numbers of elephants still roam. The 404 square-mile wilderness adjacent to Lake Kariba forms part of a remarkable Tusker gene pool that is linked to Zimbabwe’s Mana Pools and Hwange National Park. Bordering the Lake on the Zimbabwean side, the area takes...
Matusadona National Park in northern Zimbabwe is one of the few places in Africa where great numbers of elephants still roam.
The 404 square-mile wilderness adjacent to Lake Kariba forms part of a remarkable Tusker gene pool that is linked to Zimbabwe’s Mana Pools and Hwange National Park.
What is the role of MAPP in fighting poaching in Matusadona and Kariba?
The role of MAPP, as defined in our Trust Deed document is ‘To assist the Zimbabwean Parks and Wildlife Management Authority and its successors or assigns in preserving the fish population and wildlife, including the elephant populations in the greater Lake Kariba area for the benefit of the citizens of the Republic of Zimbabwe in perpetuity’.